स्वास्थ्य र शैली – Bikas Times
काठमाडाैं । डण्डीफोर आम समस्या हो । यसले अनुहारको सुन्दरता बिग्रन्छ कि भनेर मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् । डण्डीफोर निको भए पनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । डण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा त्यसलाई निचोर्नु नै समस्या निम्त्याउनु हो । फेरि त्यसको दागलाई हटाउने नाममा प्रयोग गरिने क्रिमले छालामा साइडइफेक्ट गर्न सक्छ । यहाँ डण्डीफोर …
काठमाडाैं । कुनै बेला यस्तो थियो जतिखेर किशोर किशोरीहरु चौरमा खेल्दा खेल्दै खेरी घुडामा चोट लागेर वा साइकलबाट लडेपछि उपचारका लागि हाड जोर्नी विज्ञका दर्गुर्थे । अब जमान फेरिसकेको छ । एउटा सानो कोठामा घन्टौसम्म मोबाईल खेलाउँदा खेलाउँदै नसासम्बन्धि गम्भीर समस्या लिएर आधुनिक किशोर किशोरी नसा विज्ञका आपत्कालिन सेवा लिन थालेका छन् । हो, अत्यधिक …
एजेन्सी । हलिउड नायिका तथा चर्चित गायिका सेलेना गोमेजले यसै वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको खुलासा गरेकी छिन् । गत वर्ष किड्नी खराब भएको समाचार अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका थिए । गोमेज २०१५ देखि ‘लुपस’ रोगको कारण थलिएकी थिइन । गोमेजले यसै वर्षको मेमा आफ्नो एकल म्युजिक ‘ब्याड लायर’ लिएर साङ्गेतिक क्षेत्रमा पुनः फर्किएकी छिन् …
एक करोड शिवलिङ्गको पूजा गरिने
काठमाडौँ । श्री मानस तथा बोलबम परिवारले जनकपुरमा एक करोड शिवलिङ्गको पूजा आयोजना गर्ने भएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो संस्थाका अध्यक्ष ललन ठाकुरले त्यस पूजामा नेपाल र भारतका भक्तजन आउने जानकारी दिनुभयो । यही कात्तिक २२ गते जनकपुरमा आयोजना हुने त्यस कार्यक्रममा ११ दिनको कठोर यात्रा गरी नेपालका १० हजार तथा भारतका …
बडादशैँको साइत सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादशैँको साइत सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०७४ असोज ५ गते बिहीबार आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवरात्र आरम्भ हुनेछ । त्यस दिन बिहान ९ बजेर ४१ मिनेटमा घटस्थापना गर्न शुभ साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । आगामी असोज ९ गते सोमबार …
बैतडीको तल्लोस्वराडमा औलोरोगको जोखिम
बैतडी, २२ भदौ । बैतडीको तल्लोस्वराडमा औलोरोगको जोखिम रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएकोे छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार साविकका मेलौली, शिवनाथ र महारुद्र गाविस औलो जोखिममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति सन्तोष पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । खुला सिमाना, तापक्रममा वृद्धि र लामखुट्टेका कारण …
मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पताल बन्द गर्न सिफारिस
काठमाडौं । अस्पताल सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पताल बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डबिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको भनी विवादित उक्त कलेजको पूर्वाधार अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। समितिले राजधानीको घट्टेकुलोस्थित अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरी शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको …
स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेललाई स्वाइनफ्लु
काठमाडौं । एक हप्ता देखी वीर अस्पतालमा उपाचार गराइरहेको स्वास्थ मन्त्री गरिराजमणि पोखरेललाई स्वाइनफ्लु भएको छ । पोखरेललाई एन्फ्लुएन्जा ए पोजेटिभ भाइरस (एच -1 एन-1) पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए । दुई दिनअघि स्वाइनफ्लुको आशंकामा खकार परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो । राहत वितरणका लागि महोत्तरी गएका बेला बिरामी भएपछि …
स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा एकको मृत्यु
चितवन । चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एको मृत्यु भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनका अनुसार नवलपरासीकी २१ वर्षीया महिलाको स्क्रब टाइफबाट भरतपुरस्थित सेन्ट्रल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । अस्पतालबाट प्राप्त रिर्पोटका आधारमा कार्यालयका कीट नियन्त्रण निरीक्षक रामकुमार केसीले महिलाको मृत्युको कारण स्क्रब टाइफ भएको जानकारी दिनुभएको हो । योसँगै जिल्लामा साउन …
अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप ह्वात्तै
फलेवास : केही दिनयता जिल्ला अस्पताल पर्वतमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । अहिले जिल्ला अस्पताल पर्वतमा दैनिक एक सय २० जनासम्म भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अन्य समयमा ४० देखि ५० जनासम्म बिरामी आउने अस्पतालमा विगत दुई सातादेखि अस्पताल आउने बिरामीको संख्यामा तेब्बरले वृद्धि भएको छ । …